ကော့စမွီကျွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကော့စမွီကျွန်း သည် ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း အလွန်ရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်း ဖြစ်သည်။ ပထဝီဝင်အားဖြင့် ချွမ်ဖုံကျွန်းစုတွင် တည်ရှိပြီး ဆူရတ်ဌာနီပြည်နယ်တွင် ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကော့စမွီ အား စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ် အဆင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ဒေသတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရှိသည်။ ကော့စမွီကျွန်းသည် ၂၂၈.၇ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၈၈.၃ စတုရန်းမိုင်) ရှိသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖူးခက်ကျွန်း ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံးကျွန်း ဖြစ်သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် ၂.၇ သန်း လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ 
City of Ko Samui
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/TH' not found. 9°30′N 100°00′E﻿ / ﻿9.500°N 100.000°E﻿ / 9.500; 100.000ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/TH' not found. 9°30′N 100°00′E﻿ / ﻿9.500°N 100.000°E﻿ / 9.500; 100.000
၂၂၈.၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈၈.၃ စတုရန်းမိုင်)
၆၃၅ မီတာ (၂၀၈၃ ပေ)
၀ မီတာ (၀ ပေ)
၈ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်မှုစီမံကိန်းများ
လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ရာစခန့်ကတည်းက ဤကျွန်းတွင် မလေးကျွန်းဆွယ်နှင့် တရုတ်တောင်ပိုင်းမှ တံငါသည်များအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၁၆၈၇ခုနှစ် တရုတ်မြေပုံများတွင် ပူလိုကော်နမ်အမည်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
စမွီဟူသော အမည်၏မူလအစကိုမသိရသေးပါ။ ၎င်းသည် 'ပင်လယ်ရာသီဥတု' ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော Sanskrit- တမီးလ်စကားလုံး สมวย မှဆင်းသက်လာနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ၎င်းသည်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ต้นหมุย (နာမည်အပြည့်အစုံต้นสมุย) ဟု အများသိသောသစ်ပင်၏ အမည်မှ ဆင်းသက်လာနိုင်သည်။ တတိယဖြစ်နိုင်ခြေမှာ စမွီကျွန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ဖူးသည့် အစောပိုင်းဟိုင်နန်ကုန်သည်များထံမှ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟိုင်နန်တရုတ်ဘာသာစကားတွင် เซ่าบ่วย သည် 'ပထမကျွန်း'၊ 'အတားအဆီး' သို့မဟုတ် 'ဂိတ်' သို့မဟုတ် စာသားအရ 'လှပသောကမ်းခြေ' ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတို့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံရာတွင် ပထမဆုံးသော ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအမည်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ สมุย သို့ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ လူအချို့က“ samui” ဟူသောစကားလုံးသည်မလေးစကားလုံး saboey (သို့) 'လုံခြုံသောခိုလှုံရာ' မှဆင်းသက်လာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤသီအိုရီများထဲမှမည်သည့်အခိုင်အမာအတည်ပြုချက်မျှမရှိပါ။ ကော့ ဆိုသည်မှာ ထိုင်းဘာသာဖြင့် ကျွန်း ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းအထိ ကော့စမွီသည်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်မကြီးနှင့်ဆက်သွယ်မှုနည်းပါးသောသီးခြားရပ်တည်နိုင်သည့်ရပ်ရွာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းအထိကျွန်းသည် လမ်းများမရှိဘဲ ကျွန်းတစ်ဖက်မှအခြားတစ်ဖက်သို့ ၁၅ ကီလိုမီတာ (၉.၃ မိုင်) ရှိသည့် ခရီးဖြစ်ပြီး တောင်တန်းအလယ်ပိုင်းတောတောင်များတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်း၍ တစ်နေကုန်ခရီးနှင်ရသည်။ ကော့စမွီကျွန်း၏ စီးပွားရေးသည်ယခုအခါအဓိကအားဖြင့် အောင်မြင်သောခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါ်တွင် ရပ်တည်နေသည်သာမက အုန်းနှင့်ရော်ဘာတင်ပို့ခြင်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
ကျွန်းရှိ ပထမဆုံးသော ဒေသန္တရအစိုးရအား ၁၉၅၆ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးခရိုင် တည်ဆောက်ရေးနှင့်အတူ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုဒေသပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုသာ တာဝန်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၃တွင် စမွီနှင့် ပငန်းကျွန်းများအားလုံးကို ဖုံးလွှမ်းတာဝန်ယူနိုင်သည်အထိ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်အထိ ခရိုင်တစ်ခုအတွင်းသာတည်ရှိသေးသည်။ ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ကော့ပငန်းကျွန်းသည် သီးခြား ကျန်းမာရေးနှင့် သန့်ရှင်းသောခရိုင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ခုနှစ်မှစတင်၍ ခရိုင်တစ်ခုလုံးအား တာဝန်ယူနိင်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့်သန့်ရှင်းသောခရိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အခြားခရိုင်များအားလုံးကဲ့သို့ ကော့စမွီကျွန်းသည်လည်း ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် ဒေသန္တရခွဲမြူနီစပယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ တွင် ဒေသန္တရခွဲမြူနီစပယ် မြို့နယ် မြူနီစပယ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် မြို့တော်မြူနီစပယ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
မြို့နယ်အား ပတ္တယားကဲ့သို့အလားတူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပိုမိုကြီးမားသည့် အထူးစီမံအုပ်ချုပ်မှုဧရိယာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိမည်သည့် အတည်ပြုခြင်းမျှ မရှိသေးချေ။
ကော့စမွီကျွန်းသည် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် တည်ရှိပြီး ဆူရတ်ဌာနီမြို့၏ အရှေ့မြောက်လက် ၃၅ကီလိုမီတာအကွာ ((9°N, 100°E) တွင်ရှိသည်။ ချွမ်ဖုံကျွန်းစုတွင် အထင်ရှားဆုံးကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်း၏အကျယ်ဆုံးအမှတ်မှ တိုင်းတာရာတွင် ၂၅ကီလိုမီတာ (၆မိုင်)ခန့် ကျယ်ပြန့်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် လူနေထူထပ်သည့် အပန်းဖြေကျွန်းများဖြစ်ကြသော ကော့ပငန်းကျွန်း၊ ကော့တောင်ကျွန်းနှင့် ကော့နောင်ရွမ် ကျွန်းများရှိသည်။ စမွီအရှေ့မြောက်ဘက် ဘန်းရက်အနီးတွင် လူမနေသည့် ကော့စွန်ခေါ်သည့် ကျွန်းငယ်တစ်ခုရှိပြီး ချိုဝင် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်အလွန်သေးငယ်သည့် ကော့မက်လန် ကျွန်းလေးရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင် ကော့သန်း နှင် ကော့မက်စမ်ကျွန်းများရှိပြီး ၎င်းကျွန်တွင် လည်ပတ်စရာနေရာအနည်းငယ်စီရှိကြသည်။ အနောက်ဘက် အတော်ဝေးဝေးတွင် မူကော့အန်သောင်း အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိပြီး ကျွန်းပေါင်း ၄၄ ကျွန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသို့ နေ့ချင်းပြန်ခရီးဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ကော့စမွီကျွန်း၏ အလယ်ပိုင်းတွင် တောတောင်များဖြင့် ပြည့်နက်နေပြီး ၎င်း၏ အကြီးဆုံးတောင် ခေါင်ဖွန်မှာ ၆၃၅မီတာ (၂၀၈၃ပေ) မြင့်သည်။ အခြား ကုန်းနိမ့်ပိုင်းနှင့် ကမ်းခြေတလျောက်အား လမ်းအမှတ် ၄၁၆၉ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပြီး အရှည်အားဖြင့် ၅၁ကီလိုမီတာ (၃၂မိုင်) ရှိပြီး ကျွန်းအား ပတ်၍ဖောက်လုပ်ထားသည်။ လမ်းအမှတ် ၄၁၆၉ နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည် အခြားကွန်ကရစ်လမ်းမများအားအသုံးပြု၍ ကျွန်းပေါ်ရှိအခြားနေရာများသို့ ခရီးသွားလာနိုင်သည်။
အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းတွင် ကျွန်း၏မြို့တော် နတ်ထွန်မြို့ရှိပြီး လူနေအိမ်ယာများ၊ အစိုးရရုံးများနှင့်အတူ ၎င်းကျွန်း၏ ကူးတို့ဆိပ်ကြီး ၅ခုအနက် အဓိကကူးတို့ဆိပ်၂ ခု အား တွေ့ရသည်။ နတ်ထွန်သည် တံငါလှေများအတွက် အဓိက ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး ယာဉ်များနှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးအတွက် အဓိကကျသော ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။ ဤဒေသသည် ကုန်းမကြီးနှင့် အနီးဆုံးသောမြို့ဖြစ်ပြီး အဓိကဆိပ်ကမ်းရှိသည့်အတက် စမွီ၏အရေးပါသော စီးပွားရေးဒေသဖြစ်လာသည်။ မကြာသေးမီကဒေသတွင်းအုန်းသီးလုပ်ငန်းအပေါ်မှီခိုမှုမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြင် လေဆိပ်၏အရှေ့မြောက်ဘက်တည်နေရာနှင့် အတူအကူးအပြောင်းသည် ချိုဝင် (Chaweng) နှင့် ဘိုဖွတ် (Bophut) တို့တွင်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းများတိုးပွားလာစေသည်။
ကော့စမွီကျွန်းသည် အပူပိုင်း ဆာဗန်နား ရာသီဥတုအားပိုင်ဆိုင်းထားသည်။ ကျွန်းတွင်ခြောက်သွေ့ရာသီရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလတွင်တစ်လပျမ်းမျှမိုးရေချိန် ၆၀ မီလီမီတာ (၂ လက်မ) အပူချိန်မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံး ၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးပျမ်းမျှအပူချိန် ၂၈ ဒီဂရီနီးပါးရှိသည်။ ရာသီဥတုသည်တစ်နှစ်လုံးအတွက်နွေးထွေးပြီးစိုစွတ်သည်။ Phuket နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိအခြားဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Samui ၏ရာသီဥတုမှာပိုမိုခြောက်သွေ့သည် (Samui သည်တစ်နှစ်လျှင်မိုးရေ ၁,၉၆၀ မီလီမီတာရွာသွန်းသည်၊ ဖူးခက်ကျွန်းမှာ မိုးရေချိန် ၂,၂၂၀ မီလီမီတာ (၈၇ လက်မ) ရရှိသည်။ ဖူးခက်၏ခြောက်သွေ့သောရာသီသည်ခြောက်လမှရှစ်လအထိကြာမြင့်သည်။ စမွီတွင်ကား မိုးရေးချိန် ၂၁၂ မီလီမီတာ (၈ လက်မ)အထက်ရရှိသော လမှာ နှစ်လသာရှိသည်။ အဆိုးရွားဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုမှာအောက်တိုဘာနှင့်နိုဝင်ဘာလများတွင်ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းရာသီဥတုကြောင့်နှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးရေရရှိသည်။ တခါရွာလျှင် မိနစ် ၂၀ မှ တနာရီခန့်ရှိသည်။
Ko Samui (1981–2010) အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ
198.4 214.7 238.7 201.0 192.2 150.0 155.0 151.9 144.0 145.7 174.0 176.7 ၂၁၄၂.၃
ကော့စမွီသည် အမ်ဖိုး(ခရိုင်)တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆူရတ်ဌာနီပြည်နယ်တွင်း ပါဝင်သည်။ ထိုခရိုင်အား ခရိုင်ခွဲ ၇ခု၊ အုပ်ချုပ်ရေးကျေးရွာ ၃၉ ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျွန်းတခုလုံးတွင် မြို့တော်စည်ပင်တစ်ခုရှိသည်။ အမ်သောင်း ကျွန်းစုအပါအဝင် အနီးအနားရှိ အခြားကျွန်းငယ်များအား အုပ်ချုပ်ရာတွင်လည်း တာဝန်ယူထားရသည်။ မူလက ဤခရိုင်နှင့် ကျွန်းများအားလုံးသည် ဆူရတ်ဌာနီပြည်နယ်၏တွင်ပါဝင်သည်။ ကော့ပငန်းနှင့်ကော့တောင်ကျွန်းများ ခရိုင်ငယ်(King amphoe) အဆင့်မှ ခွဲထွက်သွားခဲ့ကြပြီး ကော့ပငန်းကျွန်းအား ၁၉၇၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ရက်တွင် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ခုနှစ်အတွင်း အမ်သောင်းခရိုင်၏ အုပ်ချုပ်ရေးကျေးရွာနံပါတ်၇ သည် ကော့ချောက်၊ ကော့နော့ဖောင် နှင့် ကော့ ရီကန်တို့အား ဒွန်းဆက်ခရိုင်မှ တာဝန်ခွဲယူရန် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ယခုချိန်တွင် ကျေးရွာနံပါတ်၁၁ အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
စမွီလေဆိပ်သည် ဘန်ကောက်လေကြောင်းလိုင်းက တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ကုပ္မဏီပိုင်လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဤလေဆိပ်အား ၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းမှ ကော့စမွီသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပြီး အဓိကအရေးပါသည့် တစ်ခုတည်းသော လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည်။ ဤလေဆိပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အုန်းပင်နှင့်အခြားသဘာဝပေါက်ပင်များမှ ထုတ်လုပ်သည့် သဘာဝလေအေးစနစ်ကြောင့် ပရာဆတ် ပရဆတ်သောင် အိုစတ် လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ကော့စမွီလေဆိပ်အား အဖွင့်ပုံစံတည်ဆောက်ထားပြီး ထိုင်းရိုးရာပုံစံ ဗိဿုကာများဖြင့် နှီးနွယ်အောင် တည်ဆောက်ပေးထားသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်လေဆိပ်သည်ခရီးသည် ၁.၃ သန်းနှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၁၇,၇၀၇ တို့ကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ယခုလေဆိပ်ကို Thai Airways International မှဘန်ကောက်သို့၊ Firefly လေကြောင်းလိုင်းများမှကွာလာလမ်ပူနှင့် Penang လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်စင်ကာပူ SilkAir တို့ကထပ်မံ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
စမွီမှဖူးခက်နှင့်အခြားအခြားနေရာများသို့လေကြောင်းခရီးစဉ်များလည်းရှိသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့်လေဆိပ်ဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်တိုင်ကြားမှုများကြောင့် စမွီလေဆိပ်သည် ဒုတိယဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
ပြည်မကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ကားနှင့် ခရီးသည်များတင်ဆောင်နိုင်သည့် သင်္ဘောလိုင်းအချို့ရှိသည်။ ၎င်း သင်္ဘောများသည် ဒွန်ဆက် ဆိပ်ကမ်းမှ အနောက်ဘက်ရှိကျွန်းရှိ ဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သည့် လီပနွိုင်နှင့် နတ်ထွန် ဆိပ်ကမ်းများသို့ ပြေးဆွဲပေးသည်။ ပြည်မကြီးသို့ သွားသည့် အများပိုင်ယာဉ်များအားလုံးသည် နတ်ထွန်မြောက်ဘက်ရှိ ဘတ်စ်ကားဂိတ်အသစ်မှ စတင်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆောင်သွေး(နောက်ဘက်တွင်ထိုင်ခုံနှစ်တန်းပါသည့် ကားငယ်) ခေါ် အငှားယာဉ်ငယ်များသည် ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့ မြို့တပတ်လုံး ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး နေ့အချိန်တွင် သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်းပြေးဆွဲပေးသည်၊ စင်းလုံးငှားတက္ကစီများလည်းရှိပြီးခရီးအကွာအဝေးပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ကောက်ခံကြသည်။
ကော့စမွီကျွန်းရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျယ်ပြန့်လာသည့်အလျှောက် အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဘန်ဂလိုများနှင့် ပုဂ္ဂလိပိုင် ဇိမ်ခံအိမ်ယာများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်လာခဲ့သည်။ ဤကျွန်း၏ ဟိုတယ်အခန်းစုစုပေါင်းမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်စာရင်းအရ ၁၇,၄၇၉ခန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ၄၅၉ခန်း တိုးချဲ့ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အားတွက်ချက်ကြည့်ရာ၌ အာရှသား ခရီးသွား မိသားစုများက အများဆုံးဖြစ်သော်လည်း ထိပ်ပိုင်းဈေးကွက်ကို ဂျာမန်၊ ယူကေနှင့် ထိုင်းတို့က ရယူထားပြီး စုစုပေါင်းရှဲယာမှာ ၂၇ ရာခိုင်းနှုန်းရှိသည်။ ဘန်ကောင်လေကြောင်းလိုင်းကလည်း ၎င်းတို့၏ လေယာဉ်များကို ခေတ်မီစေရန်အတွက် အဲယားဘက်စ်လေယာဉ်သစ်များ၊ ပန်ကာလေယာဉ်ဖြစ်သည် အေအာတီ ၇၂ လေယာဉ်များဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ အတွင်း ဤကျွန်းသည် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်ပေါင်း ၂.၅သန်းခန့် လက်ခံရရှိပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်က ၂.၃၄ သန်းခန့် ရရှိသည်။ ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ၏အဆိုအရ ကော့စမွီကျွန်းသို့ ရာရောက်လည်ပတ်သည် ဧည့်သည်များ၏ တယောက်လျှင် ပျမ်းမျှသုံးငွေ တနေ့လျှင် ဘတ် ၇၇၀၀၀ မှ ၈၂၀၀၀ ရှိသည်ဟူ၏။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အရ ထိုင်းလွှတ်တော်အတွင်းရှိ ဥပဒေပြုသူများက နတ်ခွန်စီထမရတ်ပြည်နယ်နှင့် စမွေ ချိတ်ဆက်ပေးမည့် ၁၈ကီလိုမီတာအရှည်တံတားတစ်စင်း တည်ဆောက်ရေးအား အလေးပေးဆွေးနွေးသွားမည်ဟုသိရသည်။ လွှတ်တော်အမတ်များပြောဆိုသည်မှ ဤပရောဂျတ်သည် ထိုင်တောင်ပိုင်း၏ စီးပွားရေးအား ပိုမိုအားကောင်းလာစေမည်ဟုဆိုသည်။ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ပရာရွတ် ချန်အိုချာအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ချန်အိုချ တံတားဟု အမည်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်သွင်းထား၏။
ကော့စမွေကျွန်းအား လာရောက်လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်မှာ တစ်နှစ်လျှင် ၂,၇၀၀,၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ။ ၎င်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အပန်းဖြေစခန်း၊ ဟိုတယ်၊ ဗီလာ၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့်စက်ရုံတိုင်းသည်၎င်းတို့၏ မိလ္လာကန်စနစ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ လမ်းမကြီးမှစီးဆင်းလာသည့် မိုးရေအား စုဆောင်းရယူခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် စတင်သည့် အဓိကလမ်းမကြီး ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးနှင့်တိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန်တိုးတက်လာပြီး ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်းပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းသည် ကျွန်းပတ်လည်အဓိကလမ်းမကြီးအား ပိုမိုကျယ်ပြန်လာစေပြီး ခိုင်ခံသည့် ကတ္တရာပိုးသည့် ကွန်ကရစ်လမ်းများ၊ လမ်းလျောက်စင်္ကြံလမ်းများ၊ ထပ်တိုးလာသည့် လမ်းမီတိုင်းများ၊ ရေစုဆောင်းသည့်နေရာစသည်တို့ ပိုမိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကော့စမွီကျွန်းတွင် စီးဆင်းမိုးရေအား ပြန်လည်ပြုပြင်သည့် အဓိကစက်ရုံကြီး ၃ရုံ ရှိပြီး ချိုဝင်၊ လမိုင်းနှင့် မဲနမ်း တို့တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်းရှိ စက်ရုံ ဟိုတယ်နှင့် နေအိမ်များတွင် ကိုယ်ပိုင်မိလ္လာကန်စနစ်များ ရှိပြီးဖြစ်သည့်အလျှောက် ဤစက်ရုံကြီးများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လမ်းမကြီးများဘေးမှစီးဆင်လာသည့် စုဆောင်းရရှိလာသည့် မို‌းရေများအား သန့်စင်ရန်ဖြစ်သည်။
အခြားကျွန်းများဖြစ်ကြသည့် ကော့တောင်နှင့် ကော့ပငန်းကျွန်းများတွင် ကောင်းမွန်သည့် အခြေခံအဆောက်အဦးစီမံကိန်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ပိုမိုကြီးမားသည့် ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အခြားကျွန်းများပေါ်တွင် ထိုသို့ ရေသန့်စင်စက်ရုံများပိုမိုဆောက်လုပ်ရန်အစီအစဉ်သည်ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန် ကော့စမွေ၏ ကောင်းမွန်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများက ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းစေသည်။
ကျွဲတိုက်ပွဲတော်။ ။ ကော့စမွီ၏ ကျော်ကြားသော ပွဲတော်များထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်သစ်ကူးနေ့နှင့် သင်္ကြန်ရက်များတွင် ကျင်းပသည်။ စပိန်ကျွဲတိုက်ပွဲများနှင့်မတူပဲ အန္တရာယ်ကင်းသည်။ ဤပွဲများကို ရှေးခေတ်ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အခမ်းအနားများအရကွဲပြားသည်။ ကျွဲများကို ဖဲကြိုးများနှင့် ရွှေပိန်းချအရွက်များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်။ ပြိုင်ပွဲမစတင်မီ ဘုန်းတော်ကြီးများက ကျွဲများကို ပရိတ်‌ရေဖြန်းပက်ဖြန်းပြီး နှစ်ကြိမ်သာ ခတ်စေသည်။ လောင်းကစားခြင်းသည် ဤဖြစ်ရပ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လောင်းကစားခြင်းသည်တရားမဝင်ပါ။
Samui Regatta: Samui Regatta သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပသော ရွက်လွှင့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာတွင်သိပြီးပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော ဩစတြေးလျ၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများမှ ပြိုင်ဘက်များလည်း လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ထိုပွဲကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
Ten Stars Samui အနုပညာပါတီ - အနုပညာချစ်သူများ၊ ဒေသခံထိုင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏အနုပညာလက်ရာများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ပေးသောထပ်ခါတလဲလဲယဉ်ကျေးမှုပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေစခန်းအမျိုးမျိုးနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျင်းပသောနှစ်ပတ်လည် ဤပွဲသည် စမွေ၌ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်အဓိကထား၍ အထူးအနုပညာရှင်များ၏ တင်ဆက်မှုများဖြင့် ကျင်းပပေးသည်။
Samui Triathlon: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Triathlon Union သည်ဤပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပသည်။ ဤပွဲသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသင်တန်းသားငါးရာကျော်ကိုဆွဲဆောင်ထားသည်။
Koh Samui THA Midnight Run - Koh Samui Midnight Run သည်ထိုင်းဟိုတယ်အစည်းအရုံး (THA) နှင့် Ko Samui ၏ Thailand Association (TAKS) မှစီစဉ်သောပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်မတ်လကျင်းပသောနှစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်သူ ၂၀၀၀ ကျော်ဖြင့်အတူ Samui နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်အကြီးမားဆုံးအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများသည် ချိုဝင်(Chaweng) သဲသောင်ပြင်လမ်းများပေါ်တွင် ၅ကီလိုမီတာ (သို့) ၁၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအထိပြေးရသည်။ ပထမဆုံးအပြေးပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
Koh Samui (နှစ်ပတ်လည်ပွဲတော်) ကိုနှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ပတ်လည်တွင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော နတ်ထွန်(Nathon) နှင့် Chaweng တို့တွင်ဖြစ်သည်။ ဂီတပွဲများ၊ လက်မှုပညာပွဲများ၊ ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုပြပွဲများနှင့်ကျွန်း၏အရှည်ဆုံးကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်တည်ရှိပြီးအခမဲ့ဘူဖေးများဖြင့်လည်း ကျွေးမွေးသည်။ ကြီးမားလှပြီး ပွဲတော်၏ အခမဲ့ညစာစားပွဲဟာ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အကြီးမားဆုံးဘူဖေးပွဲအဖြစ် ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင်ခဲ့သည်။ ဤပွဲသည် စမွီရှိ ချိုဝင်သဲသောင်ပြင်တစ်လျှောက် ၂.၅ ကီလိုမီတာရှည်သည်။ ငါးရက်ကြာကျင်းပသောပွဲတော်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိပြီး ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင်ကျွန်းတည်ထောင်ခြင်း၏ ၁၂၀ နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စတင်ကျင်းပပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Koh Samui အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Podcast ပွဲတော် - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Podcast ပွဲတော်သည် Chaweng ကမ်းခြေတွင်ကျင်းပပြီး ၂၀၁၈ ပွဲတော်တွင် ရာပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံတကာပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်သည်။ Podcasts မျိုးစုံအား တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ဩစတြေးလျ Logie ဆုရရှိသူ Dilruk Jayasinha ပါဝင်အစီအစဉ်မှူးလုပ်၍ The Dollop ဇာတ်လမ်းတွဲအားတင်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
↑ Population statistics 2017 (in Thai)။ Department of Provincial Administration။ 2018-04-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ko Samui။ 14 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Koh Samui opts for luring Thais as foreigners flee"၊ Bangkok Post၊ 19 August 2019။ 14 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Climatological Data for the Period 1981–2010။ Thai Meteorological Department။7August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดยวิธีของ Penman Monteith (Reference Crop Evapotranspiration by Penman Monteith) (in Thai)။ Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department။7August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကော့စမွီကျွန်း&oldid=698836" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။